Yesaia 49 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Yehowa akoa adwuma (1-12)
Amanaman hann (6)
Israel nya awerɛkyekye (13-26)
49 Nsupɔw, muntie me;Aman a mowɔ akyirikyiri, monyɛ aso.+ Yehowa frɛɛ me ansa na wɔrewo me.*+ Bere a mehyɛ me maame yam na ɔbɔɔ me din. 2 Ɔmaa m’ano yɛe sɛ sekan a ano yɛ nnam;Ɔde ne nsa bɔɔ me ho ban.*+ Ɔyɛɛ me sɛ agyan a wɔasew ano;Ɔde me siee n’agyan kotoku mu. 3 Ɔka kyerɛɛ me sɛ: “O Israel, woyɛ m’akoa,+Wo na menam wo so beyi m’anuonyam adi.”+ 4 Nanso mekae sɛ: “Mabrɛ agu. Masɛe m’ahoɔden wɔ biribi a mfaso nni so ho, adehunu ho. Nanso minim paa sɛ Yehowa na obebu me atɛn,*Na m’akatua wɔ me Nyankopɔn nkyɛn.”+ 5 Na afei, Yehowa, Nea ɔyɛɛ me fii yafunu mu sɛ memmɛyɛ n’akoa no,Ose memfa Yakob nsan mmrɛ no,Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛboaboa Israel ano aba ne nkyɛn.+ Wɔbɛhyɛ me anuonyam wɔ Yehowa anim,Na me Nyankopɔn ayɛ m’ahoɔden. 6 Na ɔkae sɛ: “Woyɛ m’akoaA wobɛma Yakob mmusua soNa wode Israelfo a wɔakora wɔn so no asan aba; nanso ɛnyɛ ɛno nko ara. Masan de wo ayɛ hann ama amanaman no,+Na ama me nkwagye akodu asaase ano.”+ 7 Asɛm a Yehowa, Israel Gyefo, Israel Kronkronni+ no, aka akyerɛ nea wobu no animtiaa,*+ nea ɔman no kyi no, nea ɔyɛ atumfo akoa no ni: “Ahemfo behu na wɔasɔre,Na abirɛmpɔn bɛkotowEsiane Yehowa a ɔyɛ ɔnokwafo,+Israel Kronkronni no, nea wapaw wo no nti.”+ 8 Nea Yehowa aka ni: “Adom* bere mu na mitiee wo,+Nkwagye da na meboaa wo;+Na mekɔɔ so bɔɔ wo ho ban sɛ mede wo bɛyɛ apam ama nnipa,+Na woasiesie asaase no,Na woama wɔasan anya wɔn agyapade a na asɛe no bio,+ 9 Na woaka akyerɛ wɔn a wogu afiase sɛ, ‘Mumpue mmra!’+ Na woaka akyerɛ wɔn a wɔwɔ sum mu+ no sɛ, ‘Munyi mo ho adi!’ Akwan ho na wobedidi,Na anammɔnkwan nyinaa ho* bɛyɛ wɔn adidibea. 10 Ɔkɔm renne wɔn, na osukɔm nso renne wɔn.+Ɔhyew renne wɔn, na owia nso renhye wɔn,+ Efisɛ Nea ohu wɔn mmɔbɔ no bedi wɔn anim,+Na ɔde wɔn bɛfa asuti ho.+ 11 Mɛma me mmepɔw nyinaa adan ɔkwan,Na mama m’akwantempɔn so akɔ soro.+ 12 Hwɛ! Eyinom befi akyirikyiri aba,+Na hwɛ! Eyinom befi atifi ne atɔe aba,Na eyinom befi Sinim asaase so aba.”+ 13 Ɔsoro, bɔ ose; asaase, di ahurusi.+ Momma mmepɔw mfa anigye mmɔ ose.+ Efisɛ Yehowa akyekye ne manfo werɛ,+Na ohu wɔn a wɔrehu amane no mmɔbɔ.*+ 14 Nanso Sion kɔɔ so kae sɛ: “Yehowa apo me;+ Yehowa werɛ afi me.”+ 15 Ɔbea werɛ betumi afi ne ba a otua nufu ano anaa?Ne yam renhyehye no mma ne yam ba anaa? Sɛ mmea yi werɛ befi mpo a, me de, me werɛ remfi wo da.+ 16 Hwɛ! Makyerɛw* wo din agu me nsayam; ɛrempopa. W’afasu wɔ m’anim daa. 17 Wo mma de ahoɔhare bɛsan aba. Na wɔn a wodwiriw wo gui na wɔsɛee wo no befi wo nkyɛn akɔ. 18 Ma w’ani so na hwɛ wo ho hyia. Wɔn nyinaa reboaboa wɔn ho ano.+ Wɔreba wo nkyɛn. Na Yehowa aka sɛ: “Sɛ́ mete ase yi, Wobɛhyɛ wɔn nyinaa te sɛ ataade a ɛyɛ fɛ,Na wode wɔn ato wo kɔn mu sɛnea ayeforo de kɔnmuade to ne kɔn mu no. 19 Ɛwom sɛ wɔsɛee w’asaase, ɛdaa mpan, na ɛdan amamfo,+Nanso afei de, ɛhɔ bɛyɛ ketewa ama wɔn a wɔte hɔ no,+Na wɔn a wɔmenee wo no+ bɛkɔ akyirikyiri.+ 20 Na mma a wowoo wɔn bere a wo mma wui no, wɔbɛka ama woate sɛ,‘Ɛha sua dodo ma me. Ma me baabi wɔ ha ntena.’+ 21 Na wobɛka wɔ wo komam sɛ,‘Hena na ɔwoo eyinom maa me?Efisɛ meyɛ ɔbea a mahwere me mma na meyɛ obonin,Na wotuu me fii m’asaase so kɔe, na mekɔyɛɛ ɔdeduani. Hena na ɔtetee eyinom?+ Hwɛ! Ɛkaa me nko ara,+Enti eyinom fi he?’”+ 22 Nea Awurade Tumfo Yehowa aka ni: “Hwɛ! Mɛma me nsa so akyerɛ amanaman,Na mɛma m’ahyɛnsode* so akyerɛ aman.+ Wobeturu wo mma mmarima wɔ wɔn kokom.*Na wɔde wo mma mmea asi akɔnkɔn aba.+ 23 Ahemfo bɛhwɛ wo,+Na wɔn ahemmaa ama wo nufu. Wɔbɛkotow wo de wɔn anim abutubutuw fam,+Na wɔataforo wo nan ase mfuturu;+Na wubehu sɛ mene Yehowa;Wɔn a wɔde wɔn ho to me so no ani renwu.”+ 24 Wɔn a ɔsabarima akyere wɔn no, obi betumi agye wɔn afi ne nsam anaa?Na wɔn a otirimɔdenfo akyere wɔn no, obi betumi agye wɔn anaa? 25 Nanso nea Yehowa aka ni: “Wɔn a ɔsabarima akyere wɔn mpo, wobegye wɔn afi ne nsam,+Na wɔn a otirimɔdenfo akyere wɔn no, wobegye wɔn.+ Nea ɔne wo di asi no, me ne no bedi asi,+Na megye wo mma. 26 Mɛma wɔn a wɔteetee wo no awe wɔn ankasa honam,Na wɔn ankasa mogya bɛbow wɔn te sɛ nsã* dɔkɔdɔkɔ. Na nnipa* nyinaa behu sɛ mene Yehowa,+W’Agyenkwa+ ne wo Gyefo,+Yakob Tumfo no.”+
^ Nt., “ɔfrɛɛ me fii yafunu mu.”
^ Nt., “Ɔde me siee ne nsa nwini ase.”
^ Anaa “Yehowa bɛma manya atɛntrenee.”
^ Anaa “nea wobu ne kra animtiaa.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “nkoko a hwee nni so.”
^ Anaa “ohu ne mmɔborɔfo mmɔbɔ.”
^ Anaa “Makurukyerɛw.”
^ Anaa “me frankaa.”
^ Anaa “Wɔde wo mma mmarima begu wɔn nsa so aba.”